In kabadan 35 nooc iyo miirayaal Photoshop lacag la'aan ah | Abuurista khadka tooska ah
Lola curiel | | Photoshop, Khayraadka, Tababarada
Maanta waxaan haynaa ilo aan la tirin karin oo aan ka heli karno miirayaasha Photoshop iyo wixii la mid ah, Naqshadaynta aasaasiga ah iyo barnaamijka tafatirka sawirrada. Dhowr sano ka hor waxaan sidoo kale helnay sahlanaan helitaanka noocaas kheyraad ee ku anfacaya shaqada macmiilka, in kasta oo aan runta u sheegno repertoire-ka ma uusan ahayn mid ballaaran sida aan hadda haysanno.
Kuwani 40 plugins iyo miirayaasha Photoshop Waxaad sidoo kale heli doontaa ficillo taxane ah oo xoogga saara shaqooyinka qaarkood, ula bax naqshadaha qaarkood oo isdeji intaad xoogga saareyso howlaha kale ee laga yaabo inay waqti badan qaataan. Taxane ah ilo dhaqaale oo ku habboon barnaamijkaas oo beddelay naqshadeynta iyo dib-u-hagaajinta sawirrada in badan sannadihii la soo dhaafay.
Qaar ka mid ah xiriiriyeyaasha ayaa ku geynaya soo dejinta ficilada, taas oo ah waxaa laga soo raraa karaa Photoshop isla daaqada. Waxaan raadineynaa "Ficillo waxqabad" oo faylka zip-ka ee aan soo dejisanay, waxaan ka helleynaa meesha uu ku yaal si aan ugu soo rarno Photoshop. Kaliya waa inaad furto sawir si aad uga dalbatid ficilka isla daaqada waxqabadka. Wixii loogu talagalay presets, waxaan kaaga tagi a Casharrada aan ku sharaxno sida loogu rakibo Photoshop iyo Lightroom.
80 casharro saamayn qoraal ah loogu talagalay Photoshop
1 Casharro: sida loo rakibo horudhaca barnaamijka Photoshop iyo Lightroom
1.1 Ku rakib horudhaca barnaamijka Photoshop
1.2 Ku rakib hore-hagaha qaybta Lightroom
2 Xirmooyinka iyo shaandhooyinka bilaashka ah ee Photoshop
2.1 Xakamaynta Jiiflayaasha
2.2 Dareenka Sepia
2.3 Sawir hore
2.4 Waxqabadka guridda
2.5 Waxqabadka Lithprint
2.6 ON1 Saamaynta
2.7 Iska yaree oo I jar
2.15 Ururinta Google Nik
2.17 Saamaynta Sawirka Halftone
2.18 Saamaynta Goobaha Bilaashka ah ee Bilaashka ah
2.19 Filim hore
2.20 Qarow qabow
2.22 Iftiinka Iftiinka guridda
2.23 Boodhka lamadegaanka
2.24 Xilliga xagaaga
2.25 Fiidkii buluugga ahaa
2.26 Galab Caawa
2.27 Cadceedu dhunkatay
2.28 Waxqabadka HDR
2.29 Saameynta HDR ee Xooggan
2.30 Kala duwan
2.31 Waxqabadka Bella
2.32 Waxqabadyada Midab Photoshop
2.33 Isweydaarsiga ATN
2.34 Iskutallaab Lagu Sameeyay
2.35 2-xarig Technicolor
2.36 Hard Loin
3 Maxay u yihiin miirayaasha Photoshop?
Tutorial: sida loo rakibo presets oo ku yaal Photoshop iyo Lightroom
Rakib presets ee Photoshop
Marka laga hadlayo Photoshop waxaa jira laba suuragal: in sawirku ku jiro RAW ama JPG. Hadday mid tahay Faylka ceeriin Wuxuu si toos ah uga furmayaa Photoshop's Camera Raw. Hadday mid tahay JPG waa inaad furto sawirka Photoshop, aad "filter", "filter filter" camera ".
Marka aan ku jirno Camera Raw-ga ayaan aadi doonnaa "Horudhac" waana siin doonaa "saddex dhibcood" Kuwaas oo furaya ikhtiyaarro horay loo sii dejiyey (calaamadaha lagu muujiyey sawirka kore). Liiska hoos-u-dhaca waxaan ku xulan doonnaa soo dejiso astaamaha iyo horudhaca. Ugu dambeyntiina, ka fiiri galka horudhac aad rabto inaad rakibto Tani waa muhiim, qaabka ugu dambeeya ee kamarad ceyriinku kuu oggolaan maayo inaad toos u soo dejiso horayna u soo qaadatay qaab xmp, twaa inaad soo dhoofsato siib, Fayl fiiqan.
Rakib presets qolka Lightroom
Rakib presets Sidoo kale waa wax aad u fudud, sidoo kale waxaad leedahay faa'iidada taas haddii aad marka hore ku rakibto Lightroom si toos ah ayey ula jaan qaadayaan Photoshop. Waxaan ku bilaabi doonnaa furitaanka sawir oo waxaan aadi doonnaa qeybta "Horudhac" Guji "saddex dhibcood" si loo helo fursado badan oo la xusho "Soo dejiso horena". Xaaladdan haddaad soo dhoofsan karto toos xmp.
Xirmooyinka iyo shaandhooyinka bilaashka ah ee Photoshop
Xakamaynta Jiifta 2 Waa a kordhinta bilaashka ah la jaan qaada Adobe Photoshop CC iyo CC 2014. Fidintaan waxay u oggolaaneysaa inay otomatiga ficilada qaarkood in, in kastoo ay yihiin wax aasaasi ah, haddii aadan haysan waa inaad ku dabaqdaa iyaga lakabka, halka Layrs Control 2 aad ku dalban karto isbeddelada in kabadan hal lakab isla waqtigaas Hoot dhab ah haddii aad rabto inaad waqti badbaado!
Maxaad ku samayn kartaa Xakamaynta Layrs 2?
Magacyada lakabyada iyo faylalka
Ka qaad saamaynta aan loo isticmaalin dhammaan lakabyada la xushay
Iskuday saamaynta dhammaan lakabyada la xushay
Tirtir dhammaan lakabyada madhan
Yaree walxaha caqliga badan
Raadi feylal iyo fayl leh magacyo isku mid ah
U beddel dhammaan lakabyada la xushay walxaha caqliga badan
Dareenka Sepia waa shaandheyn bilaash ah, ku habboon in la siiyo taabasho gurracan oo xarrago leh sawirradaada. "Sepia" waa saameyn caadi ah, laakiin shaandhadaani waxay kuu ogolaaneysaa inaad si gooni ah u taabato sawiradaada, ma ahan oo keliya inaad ku guuleysato codadka la shiilay, bixinta "riwaayad" cayiman mahadsanid heerka isbarbar dhiga.
Marka laga hadlayo miirayaasha kuu oggolaan doona inaad sawir taabasho ah siiso sawirradaada, Waxqabadka Hore ee Sawirka Waa a ikhtiyaar weyn oo aad ku keento nuxurka dib-u-dhiska abuuristaada Dabcan gabi ahaanba waa bilaash!
Shaandhayntan bilaashka ah ayaa kaa caawin doonta inaad sawirradaada siiso a nostalgic iyo muuqaal jaceyl ah. Waxqabadka guridda waxay isu ekaysiinaysaa saamaynta midabka iyo nuunada kamaradaha hore sawir, haa, mashiinada caanka ah ee nooca Polaroid-ka ah oo hadda moodada!
Waxqabadka Lihtprint waa shaandheyn bilaash ah oo jilaysa daabacaadda saamaynta kamaradaha ugu horreeya, aad iyo aad u badan oo markii lagu dabaqayo sawir ay umuuqato sawir dhab ah oo laga keenay waagii hore. Waxaad gabi ahaanba uga soo dejisan kartaa bilaash!
ON1 waa shirkad horumarineed oo barnaamij loogu talagalay sawir qaadayaasha leh khibrad sannado badan ah oo qaybta ah, oo diiradda la saaray sidii loo siin lahaa sawir qaadayaal xirfadlayaal ah iyo hiwaayad hiwaayad qalab si ay u saxaan ugana faa'iideystaan ​​sawirradooda.
ON1 Saamaynta 2021 waa a plugin ay soo saartay shirkadda, kuna habboon Mac iyo Windows, kuwaas oo wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku darto boqolaal qaab iyo saamaynta sawiradaadas, kugu soo dhowaanshaha natiijooyinka xirfad sare leh iyada oo aan loo baahnayn in waqti badan lagu qaato tafatirka. Dhammaan miirayaasha waxaa soo xushay kooxda ON1, oo ku saleysan falanqeyn ku saabsan warshadaha sawir qaadista, iyagoo raadinaya casriyeyn iyo hal-abuurnimo.
Dhibic weyn oo ku habboon ayaa ah in qalabka wax lagu dhejiyo kaliya uma shaqeeyo sidii plugin Photoshop ah, wuxuu la jaan qaadayaa barnaamijyada kale ee naqshadeynta sida Adobe Lightroom, Capture One, Affinity Photo ama Corel Paint Shop Pro, laakiin sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa codsi kalidii ah.
Nasiib darro ON1 Raadka waa plugin la bixiyay, si kastaba ha noqotee waxay ku siinayaan suurtogalnimada inaad ku raaxeysatid tijaabo bilaash ah oo 14 maalmood ah, iyadoon loo baahnayn inaad bixiso faahfaahinta kaarkaaga deynta iyo iyada oo aan la helin wax ballanqaad ah oo ah joogitaan.
Iska yaree oo I jar
Iska yaree oo I jar waa aalad bilaash ah oo uu soo saaray Daniel Peruho oo kuu oggolaan doonta inaad toos u hagaajiso shaqadaada Photoshop. Waxaa ka mid ah ficilada ugu awooda badan ee ku darista tan waxaan iftiiminayaa kartida xulashada koox lakabyo ah oo loola macaamilo sidii shay keliya ama u dhoofso sida sawir ahaan, oo u gooya pixels aan loo baahnayn.
CCS3Ps waa qalab loogu talagalay Adobe Photoshop in wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si fudud oo dhaqso leh ugu beddesho lakabyada xaashiyaha CSS3Ps (habka beddelka waxaa lagu sameeyaa daruuraha), sheyga ugu habboon ee loogu talagalay kuwa diiradda saaraya shaqadooda naqshadaynta iyo qaabaynta bogagga shabakadda. Waad awoodaa ku soo degso bilaash oo ku jira boggiisa.
Renderly waa qalab bilaash ah oo Photoshop ah wuxuu u shaqeeyaa si aan kala go 'lahayn oo xawaare sare ku socda asalka, wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku darto noocyada shaashadda, maareynta hantida, faahfaahinta naqshadeynta oo aad si toos ah ugu dhoofiso hal guji. Haddii aad rabto inaad kala soo baxdo wax ku darida weyn isla markaana aad u hesho faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sida ay u shaqeyso, waad ku sameyn kartaa sidaas bogga rasmiga ah.
Tilmaamaha ayaa lagama maarmaan u ah qaabeynta, gaar ahaan haddii aad rabto natiijooyin xirfad leh. Hagaha hagaha waa plugin la jaan qaadi kara Photoshop, Adobe Xd, Adobe Illustrator iyo Sketch that waxay tirtireysaa hawsha xanuunka leh ee gacanta lagu daro tilmaamaha iyo shabakadaha. In kasta oo aysan ahayn aalad bilaash ah, liisanka ayaa ku kacaya qiyaastii 6 euro bishii, maxkamad bilaash ah oo 14 maalmood ah ayaa la bixiyaa.
laxamiistaha waa qalab bilaash ah oo la jaan qaadi kara Adobe Photoshop CS5, CS6 iyo CC. Kuu ogolaanayaa inaad si ay u cusboonaysiiyaan ka kooban-lakabka multi-hal guji mouse. Kaliya waa inaad doorataa lakabyada ama kooxaha aad wax ka beddeshay, xulo lakab ama halabuur kasta oo aad rabto inaad ku dabaasho isbeddelada oo aad u adeegsato amarrada si aad u cusbooneysiiso lakabyada la xushay. Amaradahan waxaad awoodi doontaa inaad iskula jaanqaadi karto qaabka lakabyada la xushay, mugdiga ama qaabka isku darka, cusbooneysiinta booska lakabyada la xushay iyo iswaafajinta muuqaalka lakabyada.
Getty Images waa bangi muuqaal aad u sharaf badan, wuxuu kaloo bixiyaa qalab bilaash ah oo la jaan qaadi kara Adobe Illustrator, InDesign, Photoshop, Premiere Pro iyo After Effects. Iyadoo aan lumin tayada, ku dariddani waxay kuu oggolaaneysaa inaad hagaajiso shaqadaada, helitaanka sawirrada, sawirrada iyo fiidiyowyada iyadoon barnaamijka laga bixin.
khad waa plugin, oo ay soo saartay chrometaphore, oo loogu talagalay kooxo horumariyayaal ah oo aan aqoon u lahayn qalabkan. Qalabkaan kuu ogolaanayaa inaad ku darto macluumaad dheeraad ah dukumintiga Photoshop oo waxaad ka soo dejisan kartaa bilaash websaydhka.
Qalabkaan bilaashka ah kaa caawin doona inaad abuurto arrimo (badanaa tusaalooyinka shabakadda) iyo wuxuu fududeeyaa shaqada naqshadeynta, velositey waxay ku daraysaa walxaha casriga ah iyo walxaha horay loo qorsheeyay ee la heli karo si aad ugu dhex gasho dukumintigaaga.
Ururinta Google Nik
Ururinta Google Nik waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee loogu talagalay Photoshop. Qalabkaan waxaa ka mid ah 7 qalab si aan caadi aheyn oo waxtar leh loogu adeegsado saameynta qabow iyo miirayaasha sawirradaada waxaadna ku shaqeysaa sawirrada naqshadahaaga:
Analog Efex Pro: si loogu ekeysiiyo saameynta kaamirooyinka analogga hore.
Lacagta 'Efex Pro': miiraa madow iyo caddaan.
Sharpener Pro: si loogu ciyaaro heerka fiiqnaanta sawirada.
Sifee: si loo yareeyo heerka buuqa sawirka.
Nolol: si loogu ciyaaro midabka iyo codka sawirada.
Midabka Efex Pro: miirayaasha si wax looga beddelo loona hagaajiyo midabada.
HDR Efex Pro: abuur sawirro HDR ah.
In kasta oo aysan ahayn plugin bilaash ah, bogga internetka ee Ururinta Google Nik waxaad ka heli kartaa tijaabo 30 maalmood oo bilaash ah. Websaydhkan waxaad ka heli kartaa xiriiriyeyaal si aad ugu soo dejiso bilaash.
Dicumintiyo waa a shaandheyn bilaash ah oo u ekaysiinaysa muuqaalka cajaladihii hore ee VHS, midabada midabbada iyo cilladaha yaryar waxay dhaliyaan saameyn dib ufiican oo muuqaal ah si ay u siiso taabasho ka duwan sawiradaada.
Saamaynta Sawirka Halftone
cunt Saamaynta Sawirka Halftone waad u ekeysiin kartaa midabada iyo muuqaalka sawirada lagu daabacay wargeysyada. Shaandhayntan gabi ahaanba bilaashka ah ayaa ah ikhtiyaar weyn oo hal abuur leh oo ku siin doonta sawiradaada shaqsiyad hal guji oo keliya.
Saamaynta Goobaha Bilaashka ah ee Bilaashka ah
Saameynta Goobaha Vintage Retro waa shaandho lagu abuuray qalab Photoshop ah oo loogu talagalay in lagu siiyo sawiradaada a retro eeg, madow iyo caddaan oo aad u textured, Saameyntani waxay xusuusinaysaa kamaradihii hore oo gebi ahaanba waa bilaash.
Iyadoo la adeegsanayo Filimka Filimka Hore, ee la jaan qaadi kara Adobe Photoshop iyo Lightroom, sawiradaada waxay u ekaan doonaan muuqaalo laga soo qaaday filim. Waxaad kala soo bixi kartaa cinwaankan iyada oo qayb ka ah xirmo oo ay ku jiraan wadar ahaan 20 saameyn oo bilaash ah.
Qarow qabow waa shaandheyn bilaash ah oo Photoshop ah la ciyaar farqiga sawirrada inaad sawirradaada siiso midab madow, sida haddii ay tahay riyo cabsi leh.
Silver Waa mid ka mid ah miirayaasha bilaashka ah ee aan ugu jeclahay Photoshop iyo Elements Photoshop. Sawiradaada u rogo madow iyo caddaan oo, in kastoo mudnaan la moodo aysan u muuqan wax cusub, waa bambo maxaa yeelay waxay u egtahay mid fiican sawir kasta.
Iftiinka Iftiinka guridda
Shaandhadhan Photoshop-ku habboon soo bandhig dogob iftiin ah sawirradaada iyo hagaajin taxane ah si loo siiyo a taabashada guridda. Iftiinka Iftiinka guridda Waxay kuu oggolaaneysaa inaad abuurto sawirrada ugu wanaagsan ee retro-ka iyo waxa ugu fiican waa inaad ku soo dejisan kartaa bilaash.
Ma rabtaa inaad siiso diiran oo raaxo leh sawirradaada? Boodhka lamadegaanka waxaad kuheli kartaa hal guji oo kaliya. Shaandhayntan bilaashka ah ayaa kaa caawin doonta inaad bixiso a dhalaal gaar ah oo aad u hal abuur leh sawirradaada ku jira Adobe Photoshop.
Xilliga Xagaaga waa shaandhada ugu habboon ee wax looga beddeli karo sawirradaada xagaaga, ku ciyaar cod iyo iftiin si loo abuuro saameyn cusub oo ka duwan. Haa runtii, u isticmaal sawirrada bannaanka, sawirrada mugdiga ah badanaa uma muuqdaan kuwo aad u wanaagsan.
Fiidkii buluugga ahaa
Fiidkii buluugga ahaa waa shaandho, ku habboon sawirradaada sii sawir taabasho leh oo dahsoon. Haddii aad dooneysid in sawiradaada ay gudbiyaan khiyaano cayiman, soo dejiso saameyntan bilaashka ah hana ka waaban inaad isku daydo.
Galab Caawa waa miiraha aad raadineyso ku siiso saameyn nostalgic iyo diiran sawiradaada, isku darka maaskaro midabbada kala duwan ayaa sawiradaada siin doona taabasho aan caadi aheyn. Waxaad kala soo bixi kartaa shaandhadaan 'Photoshop' gebi ahaanba bilaash.
Cadceedu dhunkatay waa xirmo miirayaal ah Adobe Photoshop oo ay ku jiraan wadar ahaan 10 saameyn oo ku ciyaara iftiinka si aad gabi ahaanba u badasho sawiradaada Waa wax lala yaabo! Xitaa waxaad ka dhigi kartaa sawirro lagusoo qaaday dharaar cad sidii kuwii qorrax dhaca dhacday oo kale. Ku soo dejiso dhammaan miirayaashaas gebi ahaanba bilaash.
Mararka qaar markaad sawir qaadatid waan niyad jabnaa markaan aragnay qaddarka tirada badan ee faahfaahinta ah ee lumay sababtoo ah luminta soo noqnoqota. Waxqabadka HDR, waxaa ku jira 4 ficil (mid asal ah, mid fudud, mid caadi ah oo culus) markaa waad awoodi kartaa soo celi faahfaahinta iyo midabada sawiradaada Natiijadu waa mid cajiib ah!
Saameynta HDR ee Xooggan
Waxaad ku gaari kartaa isla saameyntaan shaandhadaan bilaashka ah, soo dejiso kuna soo kabato Saameynta HDR ee Xooggan ballaadhka codadka sawiradaada. Noocyada isku hagaajinta ayaa sawiradaada u qaadi doona heer kale.
Haddii aad rabto inaad sawirradaada siiso taabasho jacayl, kani waa shaandhada aad raadineyso. Kala duwan waa a saameyn bilaash ah Adobe Photoshop taasi waxay ku siinaysaa sawiradaada a violet iyo midab casaan ah, la ciyaarista farqiga u dhexeeya si aad u hesho natiijooyin gaar ah.
Waxqabadka Bella Waa shaandhada ugufiican ee wax looga beddelo sawirradaada shabakadaha bulshada. Saameyntan bilaashka ah ee ku habboon Adobe Photoshop wuxuu ku shaqeeyaa si weyn sawirada leh midab badan, Oo wuxuu sawiradaada ka dhigayaa wax soo jiidasho leh Tijaabi!
Waxqabadyada Midab Photoshop
Waxqabadyada Midab Photoshop waa a xirmo saameyn bilaash ah oo loogu talagalay Photoshop taas oo ay ku jiraan noocyo badan oo shaandheeyaal cajiib ah si ay ula shaqeeyaan sawiradaada. Xirmada waxaa kujira wadar ahaan 12 ficil:
Farxad (12): Saamaynta kamaradda Polaroid
Guga (11): dhaldhalaalka cagaaran
Xagaaga (10): waxay siinaysaa cod diiran sawirradaada, sidii ay ahayd sawir la qaaday xagaagii
Riyoonaya (9): Shaandhayntani waxay kordhineysaa kala duwanaanta sawirradaada. Waan jeclahay natiijada!
Biliij jilicsan (8): iftiimiya oo caddeeya codka muuqaalkaaga
Rog rogeen Mary Blu (7): shaandhada cagaaran ee sawiradaada
Maryan rogay (6): ku siiso sawirradaada midab buluug ah, ku dabbaqo sawir gacmeedka waxaadna arki doontaa sida natiijadu kuu xusuusineyso farshaxanka pop.
Xirfad BW-ga Xirfadlaha ah (5): Sawiradaada u rog midab madow iyo caddaan kuna dar hadhuudh iyo dusha, tani waa ka aan ugu jeclahay.
Xirfadlaha BW (4): Saameyntani waxay aad ugu egtahay tii hore, isticmaal marka hadhuudhku u muuqdo mid xad dhaaf ah.
Mile maqan (3): oo leh kala duwanaansho sare, ku dar codadka cagaaran sawiradaada
Jacayl adag (2): Ku dar saameyn casaan ah maqaarka oo kordhiya ka soo horjeedka sawirka.
Jaceyl jilicsan (1): Saamayn la mid ah tii hore, laakiin lagu daro dhalaal, oo leh kala duwanaansho yar iyo jilicsanaan badan.
Saameyntan wuxuu ku daydaa horumarin sawir hore oo kiimiko ah, natiijadu waa sawir leh saameyn midab gaar ah, oo leh kala duwanaansho sare iyo dherer. Haddii aad tahay melancholic sawir analog ah, uma baahnid inaad dib ugu laabato filimka, ku soo dejiso bilaash Isweydaarsiga ATN loogu talagalay Photoshop oo ku dhaji dejintan sawir qaadistaada dhijitaalka ah.
Iskutallaab Lagu Sameeyay
Saameyn la mid ah ayaa kugu dhici doonta Iskutallaab Lagu Sameeyay, filter kale oo bilaash ah la jaan qaada Adobe Photoshop iyo Lightroom.
2 ficil ee xirmadan ayaa u badalaya midabada sawiradaada jilid habka 2-strip Technicolor oo caan ku ah filimada inta lagu gudajiray 20s iyo 30s. Waxa ugu fiican oo dhan, waxay abuurtaa lakabyo cusub si aysan u baabi'in doonin sawirkaaga asalka ah. Waad soo dejisan kartaa 2-xarig Technicolor loogu talagalay Photoshop gebi ahaanba bilaash!
Tallaabada Adag ee Lomo ku dabbaqo saameyn aad u xiiso badan sawirradaada, waxay si fiican ugu shaqaysaa sawirrada. Sii sawirro a retro iyo guridda taabashada super soo jiidasho leh. Waa la jaan qaada Photoshop oo aad kala soo bixi kartaa gebi ahaanba bilaash ah.
Maxay u yihiin miirayaasha Photoshop?
Shaandheeyaha Photoshop iyagu waa kheyraad aad u wanaagsan oo dib loogu cusbooneysiin karo sawirradeena ama u siiso saameyn si aad u siiso taabasho iyaga u gaar ah.
Isticmaalka miirayaasha Photoshop-ka intaa dheer shaqada ka dhigaysa mid aad ufudud maadaama ay iyagu qaabaysan yihiin waana inaan kaliya ku dabaqnaa sawirka ama meel gaar ah oo ka mid ah, innaga oo na badbaadinaysa dhammaan howlaha qaabeynta illaa aan ka helno natiijada aan raadineyno.
Si aad u hesho miirayaasha Photoshop lacag la'aan ah in aan kugula talinay soo uruurintan waxaad si fudud ku qasbeysaa inaad rakibtid ka dibna si toos ah ayey uga soo muuqan doonaan salka hoose ee Filterka menu-ka barnaamijka Adobe.
Miyaad garanaysaa meelo badan oo ah meesha soo dejiso miirayaasha Photoshop? Faallo noogu reeb oo ku tali kuwa aad aadka u isticmaasho.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » In ka badan 35 plugins Photoshop iyo miirayaasha
sida loo yaqaan "plugin" ama "filter" si loo baabi'iyo buluuga, sida ka muuqata sawirka
Ku jawaab daviss
hahaha wuxuu ku waydiisanayaa ruqsad ...
Ku jawaab qoraalka
hello qaar ka mid ah pluyin si wadno saameyn loogu yeesho sawirrada
Ku jawaab xaco
Waxyaabaha loo yaqaan 'collage'
Jawaab Felipe Tapi
Waxaan ubaahanahay kumbuyuutarradu inay daabacaan wax kabadan hal sawir xaashida maadaama aanan arkeynin dhowr sawir Waxaan ugu baahanahay si deg deg ah mahadsanid.
Ku jawaab silvana
haa maxaa sifeeyeyaal wanaagsan
Waxaan sameeyaa muuqaalka, habeenka, dabeecadda iyo sawir qaadista waxaanan jeclaan lahaa in aan haysto xoogaa wax isku dheji ama shaandheeyeyaal ah si aan awood ugu yeesho in aan ku hagaajiyo sawirradayda bilaashka ah
Jawaab Jaume Deu
Iima oggolaan doonto inaan midna soo dejiyo
Ku jawaab ana
Sida loo abuuro banner YouTube ah Canva, talaabo talaabo ah
Sida loo codsado miirayaasha casriga ah ee Photoshop